Wasiirka Diinta iyo Awqaafta JSL ayaa xidhay tartanka hababka akhiriska Qur’aanka
Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed ayaa soo xidhay xafladda tartankii 10-ka hab ee akhrinta Qur'aanka ee ka socday magaalada Hargaysa, tartankan oo ahaa mid caalami ah ayaa waxa uu ahaa tartan aad u adag, oo la isku mari waayay intii hore.
Waxa ay muujiyeen ardaydii ka qayb gashay musaabaqadaasi dadaal dheeraad ah iyo weliba diyaar garow xooggan. Dadkii ka qayb galay qaar ka mid ah ayaaba ku tilmaamay mucjiso. Waxa ay mudanyhiin in la dhiirrigeliyo da'yartaasi.
Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta waxaa ka go’an xoojinta iyo dar dar gelinta arrimaha Qur’aanka sida uu sheegay Wasiirka. Sidoo kale Wasiirku waxa uu mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay tartankaasi Qur’aanka hirgelintiisa. Ugu dambayntii Wasiirku waxa uu hadiyado guddoonsiiyey seddexdii arday ee ugu sarraysay.
Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta oo deeq nooceedu ku cusub yahay dalka ka...
Wasiirka Wasaaradda Diinta & Awqaafta JSL oo Tababar u soo xidhay 90 hablood oo ...
Wasiirka Diinta & Awqaafta JSL oo ka hadlay bilashada bisha SHuwaal
Wasiirka Diinta iyo Awqaafta jamhuuriyadda Somaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi...
Wasaaaradda Diinta iyo Awqaafta JSL oo tababar u soo gebagebaysay 200 macalin oo ka mid ah dumarka macalimiinta ka ah dugsiyada Qur’aanka Hargeis
Wasaaradda Diinta & Awqaafta JSL iyada oo sii wadda dedaalada lagu horumarinayo ...
Wasiirka Wasaaradda Diinta & Awqaafta Sh. Cabdirisaaq Xuseen Cali ( Albaani) aya...
Warkaasi oo dhammaystiran kaga bogo muuqaalkan hoose.
Wacyi geinta xanuunka Covid19
Wasiirka diinta iyo awqaafta oo macalimiinta madaarista u diray farriin la xidhi...
Wasiirka Diinta iyo Awqaafta JSL oo kelmad wacdi iyo dardaaran ah u jeediyey ergooyinka ka soo qayb galay shirweynaha afraad ee xisbul xaakimka Kulimiye 04/10/2020
Madaxweynaha qaranka J.S.L, Muuse Biixi Cabdi ahna gudoomiyaha xisbul-xaakimka K...